Allgedo.com » 2012 » June » 02
Home » Archive Daily June 2nd, 2012 Madaxweynihii hore ee dalka Masar oo xabsi daa’in lagu xukumay (Daawo 2 Video) Jun 2, 2012 Kaligii talihii mudada dheer soo xukumayay dalka Masar ayaa maanta abaal marin u helay xabsi daa’in ay ku xukuntay maxkamadda badbaadada dalka Masar. Ma ahan kaligii waxa uu xukunka adag ku dhacay ee laba wiil uu dhalay iyo qaar ka mid ah xukuumaddiisa oo ayagana lagu helay danbiyo liddi ku ah amaanka ayaa iyagana lagu kala xukumay xukun kala gadisan.
Haddaba, si aad indhahaaga ugu aragto xukumada... Press Release: Signing of the memorandum of understanding between the commission of the African Union and the government of Republic of Kenya. Jun 2, 2012 Addis ababa, Ethiopia (AOL) – The signing cermony of the memorandum of understanding (MOU) between the commission of the African Union (AU) and the Govrenment of the Republic of Kenya took place in Addis Ababa, at the AU Headquarters, on Saturday 2 June 2012.
The MOU was signed by the commissioner for peace and security, Ambassador Ramtane Lamamra, on behalf of tha AU, and by Honarable Mohamed... Tartan ciyaaraha kubadda cagta ah oo maanta ka furmay degmada Boondheere (Sawiro) Jun 2, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Tartan kubadda cagta ah ayaa maanta ka furmay degmada Boondheere, waxaana tartankaas ka wada qeyb qaadan doona 16-kooxood oo ka wada dhisan gudaha degmadaasi.
Kooxaha ka qeyb galaya tartankan ayaa kawada yimid xaafadaha kala gadisaan ee degmada Boondheere, wuxuuna tartankan qeyb ka yahay isdhex galka bulshada ee horay uu ugu dhawaaqay madaxweynaha dalka mudane ... Ciidamo Al-shabaab kasoo goostay oo si diiran Balad xaawo loogu soo dhaweeyay. Jun 2, 2012 Balad xaawo, Somalia (AOL)- Waxaa shalay oo ay taariikhdu aheyd June 1, 2012 magaalada Balad xaawo iska soo dhiibay ciidan ka soo goostay maleeshiyada Al shabaab oo tiradoodu dhantahay 20 askari oo wata gaari noociisu yahay qabaal uu saaran yahay qori loo yaqaan dhashiike sidaad halkaan ku arki kartaan, ciidankaan oo shalay markay magaalada Bala xaawo yimaadeen loo soo dhaweeyey si layaab leh taas... Shirkii Istanbul oo lasoo gaba-gabeeyay iyo 40 qodob oo muhiim ah oo laga soo saaray. Jun 2, 2012 Shir weyne looga hadlayay ayaaha Soomaaliya oo ay marti galisay dowladda Turkiga oo ay kasoo qeyb galeen qaar ka mid ah bulshada caalamka ayaa maanta lagu soo gebo-gebeeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Gebo-gebadii shirkaas ayaa waxaa laga soo saaray 40 qodob oo muhiim ah, kuwaasoo kala ah:
- In La Tixgelinayo Madaxbanaanida, Sharafta iyo Midnimada Umadda Soomaaliyeed.
- In Nabad dhab... Xildhibaan Indhabuur Saayuun oo dalka Turkiga ku geeriyooday iyo tacsi ku socota qoyska, qaraabada iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed ee uu ka tagay. Jun 2, 2012 Rabbi ha u naxariistee waxaa dhawaan dalka Turkiga ku geeriyooday Xildhibaan Cabdiraxmaan Biixi Diiriye oo ku magac dheeraa (Indhabuur Saayuun.) Marxuunka oo waayadaanba xanuunsanaa ayaa waxaa baaritaan caafimaad loo geeyay dalka Turkiga, halkaas oo ay tii Alle ugu timid.
Haddaba, maamulka AOL oo ka tiiraanyeysan geerida naxdinta leh ee ku timid marxuumka ayaa waxuu tacsi u dirayaa qoyskii, qaraabadii... Radio Allgedo/ Waraysiyo